China DCME Zonke-in-nye Gateway mveliso kunye nabathengisi | Yunke
I-DCME Zonke-in-one Isango
I-DCME sisizukulwane esitsha sokhuseleko lwentsebenzo ephezulu sisebenzisa iprosesa ephezulu yokusebenza, edityaniswe ne-chip ye-ASIC ezinikeleyo. Ngokusebenza okuphezulu kunye nokusebenza ngamandla kwedatha, i-DCME isebenza nge-wire-speed throughput kunye nenombolo ekhokelela kumzi mveliso wonxibelelwano olutsha xa kuthelekiswa ne-firewall yesiko kunye ne-broadband router. I-DCME idibanisa i-broadband router, i-firewall, iswitshi, i-VPN, ulawulo lwezithuthi kunye nolawulo, ukhuseleko lwenethiwekhi, isilawuli esingenazingcingo kunye nokulula ...
I-DCME sisizukulwane esitsha sokhuseleko lwentsebenzo ephezulu sisebenzisa iprosesa ephezulu yokusebenza, edityaniswe ne-chip ye-ASIC ezinikeleyo. Ngokusebenza okuphezulu kunye nokusebenza ngamandla kwedatha, i-DCME isebenza nge-wire-speed throughput kunye nenombolo ekhokelela kumzi mveliso wonxibelelwano olutsha xa kuthelekiswa ne-firewall yesiko kunye ne-broadband router. I-DCME idibanisa i-broadband router, i-firewall, iswitshi, i-VPN, ulawulo lwezithuthi kunye nolawulo, ukhuseleko lwenethiwekhi, isilawuli esingenazingcingo kunye noqwalaselo olulula. Ilungele amashishini amancinci naphakathi, izikolo, urhulumente, iivenkile ezinamatyathanga, iivenkile ezikwi-Intanethi ezikumgangatho ophakathi, abaqhubi kunye nolunye uthungelwano oluntsonkothileyo.
Ukusebenza okunamandla phantsi kobugcisa be-hardware obuphambili
Isango lokhuseleko lwe-DCME oluninzi olusisiseko lusebenzisa iprosesa ye-multi-core, i-ASIC enikezela ngesantya esiphezulu sokutshintsha kweinjini eyenza iqonga lehardware lonke ukuba libaleke kuyilo oluphezulu lwe-Ethernet. Uyilo olusebenzayo oluphezulu lwenza ukuba umatshini azalwe ngokusebenza okuphezulu kunye nokubonelela ngesiqinisekiso sokuchongwa kobunzulu bendlela yokuchwetheza kunye nokusebenza okuzinzileyo kwezokhuseleko, i-firewall / i-VPN, i-IPv6, kunye nokunye ukusebenza kwesoftware ephezulu.
Ulawulo lokuhamba ngokuchanekileyo kunye nolawulo lokuziphatha
I-DCME ibonelela ngemigaqo-nkqubo yokulawula ukuhamba ngokuchanekileyo ngokusekwe kwizicelo, iidilesi ze-IP, ababhalisi, iiprotocol, njl, kunye nokuseta ubuninzi, ubuncinci, i-bandwidth eqinisekisiweyo kwi-uplink kunye ne-downlink. Ngaphezulu kweeprotokholi ezingama-200 ezinokuthi zichongwe ngeDCME ukuseta isiqinisekiso se-bandwidth, ulawulo lwe-bandwidth ngokusekwe kumgaqo olandelwayo. Ngomda weseshoni ochanekileyo we-NAT, isoyikiso samanani aphezulu eseshoni abangelwa ziinkqubo ezininzi zokukhuphela izixhobo kunye nokuhlaselwa yintsholongwane.
Imisebenzi etyebileyo ye-firewall
I-DCME inamandla okulwa nokuhlaselwa. Ngobalo oluneenkcukacha kunye nohlalutyo oluchanekileyo kwiipakethi ezahlukeneyo ezinje nge-ARP, i-IP, i-ICMP, i-TCP, i-UDP, kunye nezinye iintlobo zeepakethi, uhlaselo lunokufunyanwa kwaye luvalwe kubandakanya iSYN Flood, iDDoS, ipakethi yokuhlaselwa kwepakethi ye-IP, ukuhlaselwa kwedilesi ye-IP, njl. Kwaye ulwazi lwe-alamu lunokubonelelwa ukwenza ulawulo lwenethiwekhi lukhuseleke ngakumbi. Ngokusekwe kubuchwephesha bobuchwephesha bobuchwephesha, i-DCME ibonelela ngeendlela ezinamandla zokulwa i-ARP kubandakanya i-IP + MAC yokubopha, itekhnoloji ye-ARP yokukhangela, ukufundwa kwe-ARP ethembekileyo, ukucoca i-ARP. Ukubopha kwe-IP / MAC kunye nokuchasana ne-ARP phakathi kwabaxumi kunye nezixhobo kungenziwa ngokuzenzekelayo.
Umlawuli wokufikelela odityanisiweyo
Isango lokhuseleko leDCME linokusetyenziswa njengesilawuli sokufikelela ukuseta inethiwekhi engenazingcingo kunye nezixhobo zeDCN AP. Ngokusekwe kwitekhnoloji yolawulo lweklastikhi yolawulo, i-DCME inokujonga ixabiso le-RF kwindawo ye-AP nganye kwaye ilungelelanise amandla esignali kunye nejelo le-AP nganye ngokuzenzekelayo ngokwenombolo yomsebenzisi okanye umgaqo-nkqubo wokulinganisa umthwalo. Kwangelo xesha, inokunciphisa ukuphazamiseka kwemiqondiso engenazingcingo yokuqonda ulungelelwaniso lomthwalo kunye nokuzinza kwenethiwekhi ngaphandle kwamacingo kunye nokubonelela ngesisombululo esifanelekileyo sothungelwano olungenazingcingo oluphakathi / oluncinci kunye namasebe eshishini elikhulu.
Ulawulo olululo nolulula kunye nolondolozo
Isango lokhuseleko leDCME lamkela iphepha elipheleleyo leWebhu. Kufuneka amanyathelo amathathu kuphela ukunxibelelana ne-DCME kwinethiwekhi kunye newizard yoqwalaselo.
Amanyathelo ahlukeneyo okubeka iliso, kubandakanya ukubeka esweni ukusebenza, ukoyikisa ukusongela, isilumkiso sentsholongwane / uhlaselo, njl, kunye neenkcukacha kunye nenqanaba lolwazi ngokusekwe kububanzi bebhendi kunye neseshoni ziyaxhaswa kulawulo kunye nolondolozo ngokulula.
I-10/100 / 1000M Isiseko-T
1 RS-232 (RJ-45) ikhonsoli, 2 i-USB2.0 port
Amandla / inkqubo yokuSebenza / yezibuko
Ukugcina -20 ℃ -65 ℃
Ukusebenza kwe-10% -85% Ukungavimbi
Ukugcinwa kwe-5% -95% Ukungavimbi
AC 100 100 240V, 47 ～ 63Hz
Abasebenzisi abaCetyiswayo ngaxeshanye
Ukucetyiswa kwebhendi yokuThumela ngaphandle
Iseshoni entsha ngomzuzwana
Iseshoni yeXesha elifanayo
Isitishi seMax IPSec
Abasebenzisi bokufikelela kwi-Max L2TP
Abasebenzisi bokufikelela kwi-Max SSL VPN
Abasebenzisi boqinisekiso lweMax Max
Umlawuli woFikelelo kwiWi-Fi
Ukungagqibeki kulawule iiAP
Ubuninzi be-AP ezilawulekayo
Ukuhamba ngomzila / i-NAT / iBhulorho
Inethiwekhi Umxhasi we-PPPoE, i-PPPoE chap / pap / naziphi na iindlela ezintathu zokuqinisekisa, ukunxibelelana kwakhona kwabaxhasi be-PPPoE
Umncedisi we-DHCP, iKlayenti, ukudlulisa
Umncedisi we-DNS, ummeleli
Ukuhamba ngendlela engatshintshiyo, ukuhamba ngokuhamba phambili ngokubaluleka, iRIP
I-PBR (esekwe kwidilesi yomthombo, izibuko lomthombo, idilesi yendawo ekuyiwa kuyo, umthetho olandelwayo, kunye nezinye iindlela), inkxaso ye-IP ye-hop elandelayo okanye ujongano
Ukulinganisa ulungelelwaniso lwendlela olulinganayo oluninzi, kunye nomthwalo webhendithwidth ulungelelanisa ngokuzenzekelayo umda wendlela nganye, ukufezekisa ulungelelwaniso lomthwalo ngokusekwe emgceni.
Umsebenzi wokulondolozwa kweMultilink, ishedyuli yokufumanisa imeko yelizwe, kunye nokutshintsha okuzenzekelayo kunye nokubuya phakathi kweekhonkco
Imvelaphi yeNAT Static / Dynamic
1: 1 NAT1: N NATN: N NATUkulinganisa Umthwalo weServer
Iinkqubo ezininzi ze-NAT ALG
Uvavanyo lwepakethi enzulu
Ulawulo kunye nomyinge-umda kusetyenziso oludumileyo lweP2P kubandakanya iBT, eMule, eDonkey
Ulawulo kunye nomyinge-umda kwizicelo ze-IM ezidumileyo kubandakanya i-Yahoo, i-GTalk, njl.
Ukucoca i-URL, uphicotho lweQQ
Ulawulo lwe-bandwidth esekwe kwi-IP
Ulawulo lomda wendlela yokuhamba
Ulawulo olusisiseko sokuhamba komda
Isiqinisekiso sebhendi, ukugcinwa kwebhanwidth, ulwabiwo lomda wendlela oguqukayo
Amanqanaba amabini olawulo lwe-bandwidth (i-IP kunye nolawulo lwe-bandwidth, esekwe kwizibuko)
Iindlela zokuzikhusela kuhlaselo lwe-ARP (ukufunda i-arp, i-arp yasimahla, ukhuseleko lwe-arp)
Ukubopha kwe-IP-MAC, incwadana kunye nokuzenzekelayo
I-DoS, i-DDoS ikhusela ukhuseleko
Ukukhusela umkhukula: Izikhukula ze-ICMP, izikhukula ze-UDP, isikhukula seSYN
Imibuzo ye-DNS ukukhuselwa kwezikhukula: imibuzo ye-DNS kunye nemibuzo ephindaphindayo yemibuzo yokuhlaselwa kwezikhukula
Ukhuseleko lwepakethi olungalunganga
Ukufumanisa okungalunganga kwe-IP, ukufumanisa okungagqibekanga kwe-TCP
Idilesi ye-IP kuthintela ukuhlaselwa kuhlaselo, ukhuseleko lokukhangela izibuko
Ukulahlwa koKhuseleko lweNkonzo: I-Ping yokufa, i-Teardrop, ukwahlulwa kwe-IP, ukhetho lwe-IP, iSmurf okanye iFraggle, umhlaba, ipakethe enkulu ye-ICMP
ngokusekwe kunxibelelwano, umthombo we-IP, indawo ekuya kuyo i-IP, kunye nokusetyenziswa (iiseshoni ezintsha ngomzuzwana kunye nenani leeseshoni ezifanayo)
Ukulawula ixesha leseshoni
Ulawulo lwe-Wi-Fi, ubumbeko, ukubeka esweni
Ukuphuculwa kweFirmware ngeWEB kunye neTFTP
Uqwalaselo backup kunye nokubuyisela
I-HTTPS \_ HTTP \_ IINKONZO \_ SSH
Ukulawulwa kwento ngokusekwe kwiidilesi ze-IP, iiprotocol, ishedyuli kunye nonxibelelwano
Ukungena kunye nokubeka iliso manani
Ukubeka iliso kunye neenkcukacha manani kuthungelwano lwendlela
Ukubeka iliso kunye neenkcukacha manani kwi-IP traffic
Ukubeka iliso kunye neenkcukacha manani kwinombolo yeseshoni esekwe kwidilesi ye-IP
Ukubeka iliso kunye neenkcukacha-manani kwi-bandwidth kunye nenombolo yeseshoni esekwe kwizicelo
Ukubeka iliso kunye neenkcukacha manani kumanani ohlaselo
Ukubeka iliso kunye neenkcukacha manani kwi-IP, usetyenziso, kunye nohlaselo olusekwe Ukhuseleko thambeka
Ilog yomnyhadala / ilog yokugcwala / ilog yoqwalaselo / ilog ye-alamu / ilog yokhuseleko
Ugcino log lwe-USB
Ukuthembeka okuphezulu Unxibelelwano lwenkxaso yokulinganisa umthwalo, ikhonkco yogcino
Inkqubo yokufumanisa ukungaphumeleli kwekhonkco
Isicelo esiqhelekileyo 1: Isango lokuThumela kwelinye ilizwe, idibanisa imisebenzi ye-broadband router, i-firewall, ulawulo lwezithuthi kunye nolawulo, ukhuseleko lwenethiwekhi.
Isicelo esiqhelekileyo 2: Yakha uqhagamshelo lwe-VPN phakathi kwekomkhulu namasebe
Inkcazo: DCME-320-L Isango elidityanisiweyo leDCME-320-L, elinempawu zerobhothi ebanzi, i-firewall, iswitshi, i-VPN, ulawulo lwezithuthi kunye nolawulo, ukhuseleko lwenethiwekhi, isilawuli esingenazingcingo, kunye namazibuko e-8 * 10/100 / 1000M Base-T, 1 * Console, 2 * USB2.0. Ukungagqibeki ngeeyunithi ezi-2 zelayisensi ye-AP, inkxaso yokulawula ubuninzi be-APs ezingama-32, cebisa ubuninzi babasebenzisi abangama-300.
Inkcazo: DCME-320 (R2) I-DCME-320 (R2) isango elidityanisiweyo, elinempawu ze-broadband router, firewall, switch, VPN, ulawulo lwezithuthi kunye nolawulo, ukhuseleko lwenethiwekhi, isilawuli esingenazingcingo, kunye namazibuko e-8 * 10/100 / 1000M Base-T, 2 * 1000M Combo 1 Console, 2 * USB2.0. Ukungagqibeki ngeeyunithi ezi-4 zelayisensi ye-AP, inkxaso yokulawula ubuninzi bee-APs ezingama-64, cebisa ubuninzi babasebenzisi abangama-500.
Inkcazo: DCME-520 -L I-DCME-520-L idibanisa isango, kunye neempawu ze-broadband router, firewall, switch, VPN, ulawulo lwezithuthi kunye nolawulo, ukhuseleko lwenethiwekhi, isilawuli esingenazingcingo, kunye namazibuko e-6 * 10/100 / 1000M Base-T, 1 * Console, 2 * USB2.0. Ukungagqibeki ngeeyunithi ezi-6 zelayisensi ye-AP, inkxaso yokulawula ubuninzi be-APs ezingama-256, cebisa ubuninzi babasebenzisi abayi-1000-1200.
Inkcazo: DCME-520 I-DCME-520 idibanisa isango, kunye neempawu zerobhothi ebanzi, i-firewall, iswitshi, i-VPN, ulawulo lwezithuthi kunye nolawulo, ukhuseleko lwenethiwekhi, isilawuli esingenazingcingo, kunye namazibuko e-9 * 10/100 / 1000M Base-T, 4 * 1000M combo, 1 * Ikhonsoli, 2 * USB2.0. Ukungagqibeki ngeeyunithi ezili-12 zelayisensi ye-AP, inkxaso yokulawula ubuninzi.
DCME-720 I-DCME-720 idibanisa isango, kunye neempawu zerobhothi ebanzi, i-firewall, iswitshi, i-VPN, ulawulo lwezithuthi kunye nolawulo, ukhuseleko lwenethiwekhi, isilawuli esingenazingcingo, kunye namazibuko e-17 * 10/100 / 1000M Base-T, 4 * 1000M combo, 1 * Ikhonsoli, 2 * USB2.0. Cebisa ubuninzi babasebenzisi abangama-5000.
Inkcazo: DCME-AC-10 Ilayisenisi yokuphucula ulawulo lwe-AP (ilayisensi ye-APs ezili-10)